Top 10 April, 2019 – The Art Garden Rohingya
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွက် ရွေးချယ်ခံရသော TOP-10 ကဗျာ (၁၀) ပုဒ်
စာဖတ်ပရိတ်သတ် အကြိုက် မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ်
၁။ ရိုတို့ဓလေ့ – ရေးဖွဲ့သူ- ဇာဟီးဒုလ္လာ
၂။ အိမ်အိုလေး..ေ ရေးဖွဲ့သူ- Ro Anamul Hassan
၃။ တို့နာဇီရွာလေး..ေ ရေးဖွဲ့သူ- ဇော်လွင်ထွန်း
၄။ ဂုဏ်ယူစရာ ရေးဖွဲ့သူ- Mohammed Rahyl ( မောင်တျာတျာ)
၅။ မဆုတ်မနစ် လုံ့လစိုက် ရေးဖွဲ့သူ- Lalmoti@SF Islam
Readers’ Choice Top-5 English Poems
1. A beautiful Dream By Abdu Rahman AR
2. Being A Rohingya(2) By Anamul Hassan
3. Just Because I am Rohingya By Nur Kamal
4. Give Me A Chance By Khin Maung Thein
5. Peace, No War By Ro Anwar Malik
Editors Team #TheArtGardenRohingya (1-5-2019)